Accueil > Gazetin'ny nosy > INTY SY NDAY: …Ary raha ny minisitra no manely tsaho ?
INTY SY NDAY: …Ary raha ny minisitra no manely tsaho ?
Sarotiny dia sarotiny aoka izany ngahy minisitra ny Fahasalamana fa « tsy hanaiky lembenana fa hampihatra ny lalàna eo anoloan’ny fisian’ny olona manely tsaho amin’ity raharaha pesta ity ». Izahay tsy miaro na iza na iza, ary miombon-kevitra amin’Ingahy minisitra ny amin’izany satria fahavalom-pirenena ny tsaho.
Araka ny nambaran’ity minisitra ny Fahasalamana ity hoe « sady manakorontana ny saim-bahoaka no manakorontana ny raharaham-pitsaboana ».
Efa misy rahateo ny lalàna manasazy ny fanaparitahana vaovao tsy marina, ka rehefa nanambara izany ny minisitra dia ampirisihanay sy ankaherezinay mba hahavita mampivaingana ny teny nambarany. Ampiharo tokoa, na amin’iza na amin’iza, ny lalàna fa tsy mety.
Fa etsy ankilan’izany, mba manitikitika ny saina ihany ny vaovao avoakan’ny minisitra na ny ministeran’ny Fahasalamana hatramin’izay, indrindra fa tamin’ity resaka pesta ity. Nisy vaovao tsy marina mantsy.
Vao tamin’ny alatsinainy, ohatra, taorian’ny nandraisan’Ingahy minisitra ny Fahasalamana ny masoivohon’ny fanjakana amerikanina eto sy ny tale jeneralin’ny Usaid, nanao veloma azy fa handao an’i Madagasikara ity farany, no nanambaran’Ingahy minisitra fa « roa sisa no mararin’ny pesta tsaboina any amin’ny hôpitaly ka ny iray hivoaka rahampitso (miantso ny talata) ary ny faharoa hivoaka ny alarobia. »
Ny alarobia anefa dia voalazan’ny tompon’andraikitra fa mbola misy olona 29 tsaboina noho ny aretina pesta teny amin’ny hôpitalin’Ambohimiandra, ary ny talata aza dia vao nisy olona roa nampidirina hotsaboina eny.
Dia ahoana izany ? Tsaho ve ny nambaran’Ingahy minisitra tamin’ny alatsinainy sa olona vao nampidirina tao amin’ny Hôpitalin’Ambohimiandra taorian’ny alatsinainy ireo 29 ireo ?
Ny fifandroritana eny anivon’ny fiaraha-monina eny momba ny olona matin’ny pesta sy ny tsy matin’ny pesta moa dia saika isanandro teto.
Ny mpanoratra dia afaka mijoro vavolombelona fa nisy olona roa matin’ny pesta tao amin’ny hôpitaly Ravoahangy Andrianavalona, dia ny tompon’andraikitra tao no nandrara hoe « aza resadresahana hoe matin’ny pesta ». Fa nahoana ? Ny tsy filazana ny zava-misy koa ange ka manome vahana ny tsaho e ! Sa diso izahay ?
Manampahaizana ambony (Profesora) amin’ny raharaham-pitsaboana iray koa, niresaka mivantana tamin’ny mpanoratra. Nisy olona notsaboina tao amin’ny sampan-draharaha iadidian’io Profesora io. Tsy aretina pesta mihitsy no fototry ny fitsaboana azy. Nandeha namita iraka tany ampitan’ny ranomasina ilay profesora. Nony niverina izy dia gaga nandre fa hoe « matin’ny pesta ireo marariny roa tao ». Dia nojereko avokoa ny antontan-taratasy nizahana ny fahasalaman’ireo maty ireo, izay voazaha isanandro, hoy ity Profesora, fa tsy nisy mihitsy fanamarihana hoe « tratry ny pesta » izy ireo. Saika ilay aretina nitsaboana azy hatrany amboalohany ihany no voamarika tao amin’ny taratasy fizaham-pahasalaman’izy ireo hatramin’ny farany, nahafatesany.
Dia ahoana koa izany ? Tsy tsaho ve ny filazana fa « matin’ny pesta nefa tsy izany akory » ?
Ka manitikitika ny saina ny hoe « rehefa ny minisitera na minisitra ve no milaza zavatra tsy mifanandrify amin’ny tena zava-nisy dia tsy azo ambara ho manely tsaho ? » Sa vitavitaina fotsiny eny izany fa tsy manakorontana saim-bahoaka sy tsy manakorontana ny tontolom-pitsaboana ?
Resaka fifampitaizana sy fifampifehezana ny antsika eto ka aoka tsy hanana fahazarana hanamarin-tena ianareo tompon’andraikitra e ! Sanatria toa tonga amin’ny tenin’ny ankizy hoe « ny lehibe tsy mba diso ».